« Tsy maintsy miatrika an’io aho. Efa nisy ny fotoana nialana sasatra taorian’ny tany Frantsa », hoy i Prosper (photo : source tanalife.com)
« Tsy maintsy miatrika an’io aho. Efa nisy ny fotoana nialana sasatra taorian’ny tany Frantsa », hoy i Prosper na dia mbola tsy any anaty lisitr’ireo nalahatr’Analamanga aza izy. Hotontosaina any an-drenivohitr’i Boeny rahampitso sabotsy 2 avrily ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ity hazakazaka lavitr’ezaka 21, 097 km ity. Izy mirahalahy ireo no tena mpifanandrina akaiky na dia mpiray klioba ao amin’ny Cosfa aza. Tsy hijery fotsiny na hitsara ny adin’izy mirahalahy ireo fotsiny anefa i Fulgence Rakotondrasoa, izay atleta avy any Antsirabe fa hiezaka ny hikatsaka ny amboara ihany koa.
Tamin’ny taon-dasa dia i Hajanirina, izay tanora erotrerony no voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara teo amin’ity fifaninanana ity. Tamin’ny alalan’ny fe-potoana 1 ora 08’11’’ no namitany ny anjarany tamin’izany. Tanjona ny handefasana ireo mianadahy voalohany ho atsy Maorisy hiatrika fifaninanam-pirenena amin’ny 26 jona ho avy izao. Eo amin’ny vehivavy kosa indray dia mbola hihazona ny anaram-boninahitra azony tamin’ny herintaona i Clarisse Rasoarizay (1 ora 24’O07’’).
Manaraka azy akaiky kosa i Marinah Ramanantenasoa (I ora 29’36’’) sy Ninah Andrianambinina (1 ora 32’19) izay teo amin’ny laharana faharoa sy fahatelo tamin’ny taon-dasa, kintan’ny hazakazaka lavitr’ezaka rahateo izy mirahavavy ireo. Ity farany dia vao voahosotra ho tompondaka tamin’ny Cross Country 2011.